i-South Africa ‘isendaweni enhle’ ngaphambi komdlalo obalulekile we-Tri-Series ne-New Zealand
Ukunqoba kungenza okuningi ekukhuphuleni ukuzithemba kweqembu futhi ama-Momentum Proteas awahlukile njengoba bebheke umdlalo wabo wesine we-T20 Tri-Series benomoya ophezulu emuva komdlalo obunempumelelo bedlala ne-England ngempelasonto edlulile. Usekela kapteni, u-Chloe Tryon uthi konke kulungile uma behlangana ne-New Zealand kwimidlalo yabo yama-double-header e-Bristol ngoLwesine.
Emuva kokunqoba ngama-wicket ayisithupha bedlala ne-England ngoMgqibelo odlule, i-South Africa inomfutho futhi iyazi okudingekayo kubo uma befuna ukudlala kwi-final ye-Tri-Series ngeSonto. Ama-Proteas azodinga ukunqoba uma behlula i-New Zealand ngaphambi kokuthemba iqembu elifanayo ukuthi lihlule i-England – okushiya womathathu amaqembu enamaphuzu amane, i-net run rate izocacisa ngabazodlala i-final.
u-Tryon ukholwa ukuthi iqembu lizothatha umdlandla omningi kumdlalo wakusasa emuva kokunqoba okwakhe ukuzithemba.
“Amantombazane asendaweni enhle futhi silibhekile ikusasa,” esho ephawula. “Umoya muhle, ikakhulukazi emuva komdlalo ne-England. Sihambela phezulu futhi amantombazane ayakujabulela ukudlala ne-New Zealand. Sithatha okuningi okuhle kumdlalo ne-England futhi sibheke ukusebenzisa izinhlelo zethu kusukela ekuziqeqesheni namhlanje.”
i-South Africa izoba nemicabango emibi kumdlalo wayo wokugcina e-Bristol County Ground lapho abahlulwa khona kwi-ICC Women’s World Cup semi-final bedlala ne-England onyakeni odlule, kodwa u-Tryon uthi badlulile kulokho futhi bakubhekile ukwenza imicabango emisha futhi emihle uma bebhekana nama-White Ferns.
“Sithemba ukuthi bazoligcina utshani (kwi-pitch),” ehleka u-Tryon.
“Kuntshani khona futhi ama-seamers ethu ayamoyizela kancane, kodwa sizobona ukuthi kuhamba kanjani. Wonke umuntu usebenzela kulokhu okuhambelana nabo. Ukunakekela indawo yakho futhi amantombazane abukeka kahle okwamanje.”
Kumdlalo wokugcina we-T20 phakathi kwalamaqembu womabili, i-South Africa yahlulwa kakhulu, ngama-runs angu-66 emuva kokuthi i-New Zealand ihlanganise umphumela oyirekhodi (ngaleso sikhathi) u-216/1. Kodwa u-Tryon uyagcizelela ukuthi iqembu selidlulile kulokho kuhlulwa futhi libheke ukudlala ama-Kiwis.
“Kusemuva manje,” kusho u-Tryon. “Asikwazi ukugxila kakhulu kulokhu okwenzeka. Siyazi ukuthi kwenzekani emdlalweni futhi sezwa ukuthi kumele sibeke lowomdlalo emuva futhi sisebenzele izinhlelo zethu sidlala nabo.”
Ngaphandle kokuhlulwa kabili, i-Tri-Series ilethe amalungiselelo alungile kuma-Proteas njengoba ebheke i-ICC World Women’s T20 ngasekupheleni konyaka futhi nokumenyezelwa kohlelo lomqhudelwano, isikhonkwana sesibekiwe ngaphambi komcimbi. i-South Africa iku-Group A kanye ne-England futhi u-Tryon ukholwa ukuthi le-series ihambe indlela ende ekulungiseni iqembu kulokho okubalindile e-West Indies ngoNovember.
“Womabili amaqembu asezingeni eliphezulu, amabili ahamba phambili emhlabeni,” kusho u-Tryon. “Kuhle ukudlala nabo kanye nokwazi ukuthi kulindelweni kwi-World Cup. Amaqembu ayaqina manje futhi awukwazi ukubukela amanye phansi.”
“Kumele sidlale yonke imidlalo ngawo wonke amandla ethu,” esho evala.
i-South Africa izodlala ne-New Zealand ngo-14:00 (CAT) kusasa ngaphambi kokuthi iphele i-double-header ngomdlalo ophakathi kwe-England ne-New Zealand, okuzocacisa ngamaqembu amabili azodlala kumdlalo wangeSonto.
Injabulo njengoba i-South Africa ibheka i-ICC World T20 kulonyaka Nackerdien pleased with Proteas Women’s improved performance against England u-Luus no-Lee bagcina amathemba e-SA kwi-Tri-Series i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series Moreeng praises Proteas women but wary of ‘wounded’ England as they look to clinch the series Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England